Welcome to Raj Shrestha's Personal WEB Log 2: लिम्बू भाषामा शिक्षा : अनुभव र सिकाई
लिम्बू भाषामा शिक्षा : अनुभव र सिकाई
लिम्बू भाषाको स्थिति र आवश्यकता पहिचान
नेपालमा धेरै भाषाहरु छन्, करीब १२५ भाषाहरु बोलिन्छन् । ती भाषाहरु मध्ये थोरै भाषाहरु मात्र लेख्य परम्परामा ढलीसकेका छन्, केही ढल्ने क्रममा छन् र धेरै भाषाहरु अझै पनि आख्यान परम्परामा मात्र सिमित छन् । सिमित लेख्य परम्परामा कदम चालेका भाषाहरु मध्ये लिम्बू भाषा पनि एक हो । निकै वर्षदेखि निरन्तर रुपमा प्राथमिक तहमा लिम्बू भाषाको पढाइ भइरहेको र सिक्किममा स्नातक तहसम्म लिम्बू भाषाको पठनपाठन भइरहेको अवस्था थियो । त्यसैगरी लिम्बू भाषामा अनौपचारीक शिक्षा पनि विभिन्न ठाउँहरुमा चलिरहेको र त्यसको लागि पनि पुस्तकहरु प्रकाशन भएको । तान्छोप्पा, थोक्ला, सेहोनाम्लाङ, लुङ्गा, लम्, पान्थरु, फक्ताङलुङ जस्ता पत्रपत्रिकाहरु लिम्बू भाषामा निस्किरहेका थिए । इमानसिंह चेम्जोङ, वैरागी काइला, पि.एस. मुरिङला, रणध्वज श्रेङ चोङबाङ, वि.वि. सुब्बा जस्ता व्यक्तिहरुका पुस्तक बजारमा आइसकेका थिए । बेला बेलामा लिम्बू भाषामा एकाध उपन्यासहरु पनि प्रकाशनमा भइरहेको थियो । लिम्बू भाषामा चलचित्रहरु पनि बनिरहेका थिए र गीति क्यासेटहरु त टन्नै निस्किरहेका थिए । लिम्बू भाषको शब्दकोश पनि प्रकाशन भइसकेको थियो । यहि परिपेक्षलाई हेर्दा हामीलाई लिम्बू भाषा साहित्य धनी फस्टाएको छ भन्ने लागेको थियो । बेलाबेला भाषणहरुमा मातृभाषाको भाषा साहित्यमा नेपाल भाषा पछि लिम्बू भाषा आउछ भन्ने सुनेका पनि थियौ अग्रजहरुबाट ।
प्रविणता प्रमाणपत्र तहमा लिम्बू भाषा पठनपाठनको लागि पहल
लिम्बू भाषालाई उच्च शिक्षामा पढाउन आवश्यक छ भन्ने ठहर भइसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनका कदमहरु चालियो । किरात याक्थुङ चुम्लुङका तत्कालिन महासचिव अर्जुन लिम्बू लगायत अन्य पदाधिकारीहरु तथा लिम्बू अगुवाहरु त्रिविको सम्बन्धीत कार्यालयका पदाधिकारीहरुसंग लिम्बू भाषको पठनपाठन बारे कुराकानी गर्नुभयो । यसका साथै त्रिविका प्राध्यापकहरुसंग पनि लिम्बू भाषामा पठनपाठन बारे कुराकानी भए । यति भइसकेपछि हामीले चरणबद्ध ढंगबाट काम गर्नुपर्ने कुराको सूची तयार भयो । पहिलो प्रविणता प्रमाणपत्र तहमा पढाइने लिम्बू भाषाको पाठ्यक्रम (कोर्स अफ स्टडी), दोस्रो कक्षा संचालन गर्न सकिने संभावित क्याम्पसहरुको सूची र तेस्रो प्रविणता प्रमाणपत्र तहमा लिम्बू भाषा पढाउनको लागि त्रिविमा प्रस्ताव पेश गर्ने ।
लिम्बू भाषामा प्रविणता प्रमाणपत्र तहको पाठ्यक्रम तयार गर्ने र अन्य कामहरु
पाठ्यक्रम बनाउने काम हाम्रो लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति भयो । यो कामको लागि चुम्लुङले नेपाल भाषको प्राध्यापक डा. सुन्दरकृष्ण जोशीको सहयोग लिने भयो । त्यसमा काम गर्न विभिन्न क्याम्पसहरुमा काम गरिरहनुभएका लिम्बू प्राध्यापकहरु समावेश हुनुभयो । चुम्लुङका महासचिव अर्जुन लिम्बू आफै पनि त्रि–चन्द्र क्याम्पसका प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो । मेरो काम चाहि उहाँहरुलाई आवश्यक सेवा प्रदान गर्नु र त्यस कामको डकुमेन्ट गर्नु थियो ।
हामी अब लिम्बू भाषामा प्रविणता प्रमाणपत्र तहमा लिम्बू भाषामा कक्षा संचालन हुन्छ भन्ने कुरामा निश्चित थियौ । त्यसको लागि पाठ्य सामग्रीहरु बनाउने काम एकातिर भइरहेको थियो भने अर्कोतिर भाषा कक्षा संचालन गर्ने बारे प्रचार प्रसार र विद्यार्थीहरु पनि सक्दो धेरै भर्ना गर्ने तरखरमा लाग्यौ । कक्षा संचालन हुने भयो भने म आफरु पनि भर्ना हुने साथै भाई र एक दुई जना साथीहरुलाई एकैसाथ भर्ना हुने सल्लाह गरेका थियौ । समय बित्दै गयो, लिम्बू भाषामा प्रविणता प्रमाणपत्र तहको लागि भर्ना खुलेन । के भयो भन्दै बुझ्दै जान्दा त्रिविले बिस्तारै प्रविणता प्रमाणपत्र तह हटाउदै जाने र त्यसको ठाउँमा १० जोर २ वा उच्च माध्यमिक शिक्षा नीति लागू गर्ने भएको कारण नयाँ कोर्षरु लागू नगर्ने भन्ने थाहा लाग्यो । लिम्बू भाषामा उच्च शिक्षाको पठनपाठन त्यत्तिकै भयो । मेरो लिम्बू भाषा पढ्ने रहर पनि अधूरै रह्यो ।
मातृभाषामा शिक्षा दिनुपर्छ भनी हामीले आन्दोलन गरी रहन्दा हामीले हाम्रो भाषा साहित्यलाई समृद्ध बनाउन के गरीरहेका छौ भन्ने तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । लिम्बू भाषा लेख्य परम्परामा ढलेको निकै समय भइसकेको भएता पनि हामीले धेरै गर्न बाँकि राखेका रहेछौ भन्ने अनुभव मैले गरे । हल्काफूल्का साहित्यिक सामग्रीहरु हामीले हाम्रो मातृभाषामा प्रशस्तै निकालेका रहेछौ तर गहकिला साहित्यको खाँचो यथावत रहेछ । हामीसंग उच्च शिक्षामा पठनपाठन गर्न लायक साहित्य सामग्री निस्कनै बाँकि रहेछ । यो काम समुदायमा मातृभाषा जान्नेले मात्र गर्न सक्छ । भाषामा विज्ञ भनेको अघिल्लो पुस्ता हो । अघिल्लो पुस्ताले त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्छ र हाम्रा पुर्खौलि र परम्परागत ज्ञानको संरक्षण र हस्तान्तरण गर्न सक्छ ।